Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Universal Side Sealing Bag စက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Universal Side Sealing Bag စက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ပုံစံ - SV-C Series
Universal Side Sealing Bag ပြုလုပ်သည့်စက်
EPC ကိရိယာ,unwinder နှင့်ပေါင်းစပ်,လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အထိခိုက်မခံပြီး တည်ငြိမ်သည်။.
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဖြည်စက်,အရှိန်ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးသည်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
တြိဂံခေါက်ကိရိယာသည် အလွှာတစ်ခုတည်းမှ ဖလင်ကို နှစ်ဆဖြစ်အောင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ခေါက်သည်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
ဘက်စုံသုံးပစ္စည်းများကို ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။.
ပုံမှန်စက်ပစ္စည်းများသည် နှစ်ထပ် ip ခေါက်ကိရိယာဖြစ်သည်။,အောက်ခြေ gusset ကိရိယာနှင့် ဘေးဘက်အဖွင့်ကိရိယာ. (ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးဘက်ဖွင့်ခြင်း။)
အထူး rotary တံဆိပ်ခတ်ဓားဒီဇိုင်း,အလုံပိတ်ဓား၏ သန့်ရှင်းရေးကို ဘေးကင်းစေသည်။,အဆင်ပြေတယ်။,မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။.
အထူး pneumatic တံခါးနှင့် ကြိတ်စက် နှိပ်စက်,ပင်မစက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း,ဆောင် ရွက်နိုင်သည်။-ပိတ်ဆို့ထားသော ကုန်ချောကို ကျွေးပါ။.
ခိုင်ခံ့ပေါ့ပါးသောဖွဲ့စည်းပုံ,ဘရိတ်နှင့်အတူ rolling wheel နှင့်အတူ,စက်ကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါ။.
ရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်းများသည် ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။-ကော်ကိရိယာ,ပုလဲနှင့် ထည့်သွင်းကိရိယာ,punching ယူနစ်,double sealing device နှင့် block out လုပ်ပါ။-အစာကျွေးကိရိယာ.
ရုပ်ရှင်(မီလီမီတာ) ပါဝါလိုအပ်သည်။ စက်အရွယ်အစား
SV-800C 100~760 76~760 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ 30~160 0.01~0.2 6.5KW 4.၅x၁.၅၅x၂.0
SV-1000C 100~960 76~860 8.7KW 4.၇x၁.၇၅x၂.0
SV-1200C 100~1150 76~960 30~150 9.1KW 4.၉x၁.၉၅x၂.1
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/universal-side-sealing-bag-machine.html
ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုအပြည့်အဝ-line တွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်တွေ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခဲ့သည် Universal Side Sealing Bag စက်ကျမတို့ကနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချပြီးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအပ်နှံထားသောထံ၌အလုပ်လုပ်သော၏ကစားသမားအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ပြီ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည် '' လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ခက်ကြိုးစားကြတယ်။ အဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာ၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများအတွင်းတင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ multi-လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်အားကိုးထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။
Universal Side Sealing Bag စက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Universal Side Sealing Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ